Indlela yokuphendula umnxeba weNdalo ngobubele
Abanye abantu bathi ngelixa uhamba, ihlabathi liphela ngasese. Kwinqanaba elithile, loo nto iyinyaniso kumchamo, kodwa i-feces iyisifundo se-dicier. Imikhwa yokunyamekela ingabangela ukuba usasazeka kwezifo ezifana ne-giardiasis, kwaye ubungqina obuninzi obubonayo bububi kakhulu.
Ngoko, uguqule njani uguqulelo ukusuka kwindlu yangasese ehlala phantsi ukuze uphendule umnxeba wemvelo kwihlathi? Nantsi isishwankathelo semithetho; Eminye imnandi kakhulu.
Ukuchasa ngaphandle "inkulu" ininzi yethu inokuzama ukuphepha, kodwa imithetho yokubandakanya ilula kakhulu. Ngokuxhomekeke kwizinto eziphilayo zendawo kunye nezikhokelo zobunini bomhlaba, uya kungcwaba i-poo yakho okanye uyiphathe.
Ukufumana ingcaciso engakumbi malunga nendlela engcono yokupakisha i-poo, khangela ixabiso elithandekayo "Indlela Yokutshatyalaliswa Kwimihlathi" ngu Kathleen Kathleen. Ukuba uya kungcwaba imfesane yakho, inqubo eyisiseko ilandelayo:
Hamba ubuncinane ubunzima beenyawo ezingama-200 ukusuka kwenkampu, indawo yokupheka, iindlela kunye nemithombo yamanzi.
Gboba umgodi ongama-intshi e-6 kuya kwe-8. (Ifowuni yesandla ifikeleleke, kodwa abantu abanomdla kakhulu bahlala basebenzisa intente yetende okanye bahambise izinto zokusebenza zendawo.)
Sula kunye nemifuno yasendaweni (yifake emgodini) okanye ngephepha langasese (phakamise kunye nawe kwisikhwama seplastiki).
Ukuba kunokwenzeka, sebenzisa intonga ukuvuselela idiphozithi yakho kwindawo yokungcola - kukuqhekeka kwesantya.
Gcwalisa umgodi uze uyiguqule ukuba ukhangeleke njengendawo ejikelezileyo.
I-Urine idla ngokuyinyumba, ngoko ke apho ubeka khona akuyona into enkulu njengento apho ubeka khona imfesi yakho. Okokuthi, ukuyivalela kwiindawo zangasese kudla ngokuba yinto efanelekileyo - kunciphisa umngcipheko wokugaya i-chewing ekhangayo kwindawo yakho yokuhlala ngetyuwa ... kwaye iyancipha kwi-stink! Unokuzama kwakhona ukujonganisa ibhotile .
Ukuhamba Ngaphandle: Akunakubi
Emva kokuba ufumane ukuxhoma kokuhamba ngaphandle kwamanzi, ukuhamba ngaphandle akuyona into ebaluleke kakhulu. Oko kwathiwa, shiya iifutha ezimanzi ekhaya (ukuba ufuna iifutha ezimanzi, hamba kwiintlobo ezingenakulinganiswa) kwaye upake iipampu ezisetyenzisiweyo kunye neepads. Kaninzi "
Isiphi Isihlalo Sokugweba sikaKristu?
IYunivesithi yaseNew England iNgeniso
Ukuhlaziywa kwe-PSAT Ukubhala nokuLwa koLwimi
I-Wrestling's High Death Rate
I-Wall Street War ukuLawula i-Erie Railroad